United States kwadoro na Huawei ga-aga n'ihu na-enweghị ọrụ Google | Gam akporosis
Ozi ojoo maka ndi oru Huawei ndi tinyeworo olile anya ha na onye isi ochichi ohuru nke United States, Joe Biden, ka ndi ahia nke China a nwee ikega-echefu ịnụ ụtọ ọrụ Google, ebe ọ bụ na Chamber of Commerce nke United States kwadoro veto na Huawei.
Dabere na Gina Raimondo, onye njikwa ya kacha elu, ọ dịghị ihe kpatara ya maka Huawei (na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke China) ịpụ na ndepụta ojii, yabụ maka oge ụlọ ọrụ ndị America ga-aga n'ihu na ha agaghị enwe ike iru nkwekọrịta azụmahịa na ha. Nrọ nke malitere na May 2019 maka Huawei na nke ahụ hụrụ na ọ ga-akwụsị na mgbanwe nke onye isi ala, na-aga n'ihu.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị bụ ndị na-ebo Trump (Republican) ụta maka Huawei veto, ọ bụ naanị gosipụtara nyocha nke gọọmentị Obama (Democrat) bidoro afọ ole na ole gara aga. Enweghị ihe ngosi na mgbanwe nke onye isi ala nke United States, pụtara mgbanwe na ọgwụgwọ nke Huawei na-anata n'ime afọ abụọ gara aga, na nchịkwa nke Biden (Democrat) ka gosipụtara ya.
HarmonyOS abụghị ihe ekwesịrị ịbụ
Mgbe Huawei kwupụtara HarmonyOS, ọ na-ekwu na ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, sistemụ nke ahụ ọ gaghị dabere na androidOtú ọ dị, dị ka ArtsTechnica nwere ike ịchọpụta ụbọchị ole na ole gara aga, HarmonyOS abụghị ihe ọzọ karịa ndụdụ dabere na Android 10, dị ka sistemụ arụmọrụ nke mbadamba Ọkụ Amazon.
A ga-atụ anya na Huawei ga-ebupụta ndụdụ nke gam akporo ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ gọnahụrụ ya n'ọtụtụ oge, mana ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ iji gaa n'ihu na-ebupụta ngwaọrụ ndị kwekọrọ na ọtụtụ ndị dị na ahịa Play. Kedu ejila ọrụ Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » United States kwadoro na Huawei ga-aga n'ihu na-enweghị ọrụ Google